MATE: waa maxay oo sidee loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19? | Laga soo bilaabo Linux
MATE waa iftiin oo dhameystiran Deegaanka Desktop, ku saabsan iyo sida Qoraxda, ma daabacno marar badan, innagoo ah kuweenna qoraalkii ugu dambeeyay qeexayaa waxa ku saabsan, in ka badan 3 sano ka hor.
Tan waxaa hubaal u ah xaqiiqda ah in guud ahaan, laga hadlo oo keliya markii laga hadlayo Linux Mint ama Ubuntu MATE, tan iyo markii la yidhi Deegaanka Desktop Waxaa si weyn loo isticmaalaa labadaba Qaybinta GNU / Linux. Sidaa darteed, qoraalkan waxaan diiradda saari doonnaa gaar ahaan Maxay tahay? y Sidee u rakibtaa?. Adkeynaya, dabcan, hada DEBIAN GNU / metadistribution Linux, ee ugu dambeeyay version, ka lambarka 10, magaca summada Buster. Kaas oo sidoo kale hada aasaas u ah qaybinta MX-Linux 19 (Duckling xun).
Iyadoo la tixraacayo degelkeeda rasmiga ah, MATE waxaa loo tixgeliyaa:
"A Desktop Environment in uu yahay lsoo socota GNOME 2. Waxay bixisaa jawi dareen leh oo soo jiidasho leh iyadoo la adeegsanayo sarbeebyada dhaqameed ee Linux iyo nidaamyada kale ee Unix-ka ee hawlgalka. MATE si firfircoon ayaa loo horumarinayaa si loogu daro taageerada teknoolojiyada cusub, iyadoo la ilaalinayo khibrada miisaanka caadiga ah. ” Websaydhka rasmiga ah ee Mate
1 Wax walba oo ku saabsan MATE
Wax walba oo ku saabsan MATE
MATE la sii daayay taariikhda 19 August 2011 magaceeduna wuxuu ka yimaadaa Yerba mate, nooc ka mid ah holly u dhashay qaybaha kuleylka-hoose ee Koonfurta Ameerika.
Waqtigan xaadirka ah waxaa loogu talagalay 1.24 version (horumarka iyo 1.22 (xasilloon)
MATE waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo keyd rasmi ah on badan oo GNU / Linux Distros ah, sida: DEBIAN, Mint, Ubuntu iyo Fedora.
Nidaamka deegaanka ee codsiyada hooyo ee MATE Waxay ka kooban tahay barnaamijyo dhowr ah oo leh magacyo ka duwan kuwaas qaybaha GNOME asalka ah, si looga fogaado isku dhaca baakadaha. Tusaale ahaan: Sanduuqa (Maamulaha Faylka), Qalinka (Tifatiraha Qoraalka), Isha MATE (Muuqaalka Sawirka), iyo kuwo kale oo badan.
Bilowgeeda, MATE ahaa kaliya la jaan qaadi kara GTK + 2. Sida nooca 1.12 waxay ku habboon tahay labadaba GTK + 2 sida la socota GTK + 3.
Muy khafiif ah oo leh codsiyo wanaagsan iyo xasilooni sare.
Muuqaal tradicional taas oo sahlaysa isticmaalkeeda iyo aqbalaadeeda.
Iswaafajinta asaliga ah oo leh barnaamijyada GNOME maxaa yeelay labaduba waxay adeegsadaan GTK +.
Waxay ku habboon tahay dad laylis ah bilaabaya inuu ka bilowdo adduunka GNU / Linux iyo / ama haysto qalab yar oo agab ah.
Waxay leedahay animations ka yar iyo saamaynta muuqaal ama muuqaal marka loo barbar dhigo bay'adaha kale ee Desktop-ka ka adag sida KDE Plasma ama Cinnamon.
Heerkeeda ku-habboonaanta waxaa tixgeliya dad badan aad u aasaasi ah oo fudud marka la barbar dhigo deegaannada kale ee Desktop-ka ka adag sida KDE Plasma ama Cinnamon.
In yar oo barnaamijyada hooyo ah iyo fidinta ah marka la barbardhigo Degaanada Desktop ka adag sida KDE Plasma ama Cinnamon, laakiin waxay haysaa faa iidada isticmaalka barnaamijyo badan oo GNOME3 ah.
Websaydhka rasmiga ah ee Mashruuca MATE
Xagee ka aadi kartaa Blog, Tilmaamaha rakibida, Macluumaadka horumarka iyo Bulshada Isticmaalaha, iyo waxyaabo kale oo badan. Xiriirimaha soo socda ayaa sidoo kale la heli karaa si loogu kabo macluumaadka MATE:
Xullo Deegaanka Desktop MATE iyo wixii kale ee koronto ama baakado dheeri ah.
Nota: Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa a Desktop Environment ku saleysan MATE fudud ama dhammeystiran adigoo beddelaya xirmada mate by mate-core o mate-desktop-environment. Awood u lahaanshaha inaad ku buuxiso xirmooyinka sida: mate-desktop-environment-extras y mate-tweak.
Dib u bilow oo soo gal adoo dooranaya Deegaanka Desktop MATE, haddii ay dhacdo inaad haysato wax ka badan hal Deegaanka Desktop rakibay oo aanad dooran Maareeyaha Soo-gal
Xusuusnowna, kani waa kan booska shanaad taxane ah oo ku saabsan Goobaha GNU / Linux Desktop. Kuwii hore waxay ku saabsanaayeen GNOME, KDE Plasma, XFCE y Qoraxda. Halka kuwa soo socda ay ku saabsan yihiin Lxde, iyo ugu dambeyn LXQT.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Entorno de Escritorio» lagu yaqaan magaca «MATE», kaas oo loo arko inuu yahay midka ugu fudud uguna waxqabadka badan, sida XFCE, oo leh qaab dhaqameed iyo noocyo wanaagsan oo codsiyo hooyo ah, adduunka dhexdiisa «Distribuciones GNU/Linux», noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MATE: waa maxay oo sidee loogu dhejiyaa DEBIAN 10 iyo MX-Linux 19?
Maqaal aad u dhameystiran sida lagu yaqaan astaamaha Linux Post Install